थप ३ जनामा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना’ ‘भा”इर’स’, ‘ल’क’डा’उ’न’को’ सम्भावना कति ? – News452Online
थप ३ जनामा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना’ ‘भा”इर’स’, ‘ल’क’डा’उ’न’को’ सम्भावना कति ?
Posted byadmin	 April 6, 2021 Leaveacomment on थप ३ जनामा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना’ ‘भा”इर’स’, ‘ल’क’डा’उ’न’को’ सम्भावना कति ?
काठमाडौं । भारतमा ‘को’रो’ना”भा’इ’र’स’ ‘सं’क्र’म’ण’ले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका बेला पश्चिम नेपालमा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना’को ‘भा’इ’र’स’ देखिएको छ।नेपालमा पनि पछिल्लो दिनको तुलनामा संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्दा भारतबाट स्वदेश आएका तीन जना नेपालीमा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना”भा’इ’र’स’ ‘सं’क्र’म’ण’पुष्टि भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना”भा’इ’र’स’ ‘सं’क्र’म’ण’पुष्टि भएको हो । प्रदेश सरकारकाअनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कञ्चनपुरका २२ वर्षीय, डडेल्धुराका ३१ वर्षीय र डोटीका ३० वर्षीय पुरुषमा नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना”भा’इ’र’स’ ‘सं’क्र’म’ण’ पुष्टि भएको हो ।
उनीहरु हाल होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनीहरु कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै आएका थिए । सो ‘भा’इ’र’स’ तिव्ररुपमा फैलिन भएकाले सचेत रहनु पर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।तर, दैनिक रुपमा भारतबाट भित्रिएका हजारौँ नागरिकलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सकिरहेको छ । जसले जोखिम बढाइरहेको छ । यता स्थानीय प्रशासनले भने नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना’ फैलिन नदिन तयारी थालिएको जनाएको छ ।
लकडाउनको सम्भावना कति ?
भारतमा पछिल्लो समय एक लाख तीन हजार जनामा ‘को’रो’ना”सं’क्र’म’ण’ भएको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा लकडाउन लगाइएको छ भने बंगलादेशमा पनि एक साताका लागि लकडाउन गरिएको छ ।
नेपालमा पनि नयाँ प्रकारको ‘को’रो’ना”भा’इ’र’स’ देखिएको भए पनि सरकारले लकडाउन गर्ने कि नगर्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर, सावधानी अपनाउन भने आग्रह गरेको छ ।
भक्तपुरको चर्चित बिस्केट जात्रालाई यस वर्ष पनि रोक लगाइसकेको छ । विस्तारै धार्मिकसहित भीडभाड हुने क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गर्ने देखिए पनि लकडाउन नै हुने सम्भावनाबारे केन्द्रीय सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन ।
Posted byadmin April 6, 2021 Posted inrochak
६ दिनमा ५ करोडले हेरेको ललितपुरको भाइरल ड’रलाग्दो अ’चम्मको हल्लिने ठाउ, ज्या’न जो’खिममा राखेर यस्तो गर्छन (हेर्नुस् भिडियो)